Usoro mmepụta karama na nsogbu ndị a na-ahụkarị
site ha na 2020-09-15
1. Isi usoro ihe osise nke karama iko bụ: Ndị a , nkwakọ ngwaahịa → na-ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe 2 ....
Ọganihu ahịa, ọnọdụ na amụma nke karama iko na iko iko si 2020 ruo 2025
A na-ejikarị karama iko na iko iko eme ihe na mmanya na mmanya na-aba n'anya, nke nwere ike ịkwado inertness, sterility na impermeability. Ahịa ahịa karama na iko iko na 2019 bụ US $ 60.91 ijeri ma na-atụ anya iru US $ 77.25 ijeri ...
Mmepe mmepe nke iko
Onye mbụ mepụtara iko bụ ụwa Ijipt oge ochie. Mpụta na ojiji nke iko nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 4,000 na ndụ mmadụ. E gwupụtala obere kpụrụtụ kpụkọrọ akpụkọ na ngwugwu nke Mesopotamia na Ijipt oge ochie puku afọ anọ gara aga. Na narị afọ nke 12 AD, iko azụmahịa ...
Banyere ihe na agba
site ha na 2020-08-20
Dị ka ọ na-esighị ike, ihe na-esiri ike (mgbe ọ kụrụ ụda na-ada ụda), ụcha na-acha anụnụ anụnụ, nwere ike ịkpọtụrụ ihe ịchọ mma, nri, na karama emulsion karama, karama agụụ bụ ihe onwunwe nke karama ahụ , nwekwara ike ime obere karama ude. ...
A na-eji karama emee karama iko, nhazi ogbe, agbaze, ịkpụzi, ọgwụgwọ okpomọkụ na usoro ndị ọzọ. N'etiti ha, ọgwụgwọ ọkụ na-agụnye nkwụsịtụ, quenching na usoro ndị ọzọ. Okpomoku ogwu bu ikpochapu ma obu iweputa nsogbu, nkewa nkewa ma obu ihe nkpuchi ...
Xuzhou Jiamei mbukota Products Co., Ltd. bụ a ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta na nhazi nke nkwakọ ihe, iko ngwaahịa, aluminum ngwaahịa, plastic ngwaahịa, ude ite, ntu Polish karama, ude mmiri karama, mkpa mmanụ karama, onu mmiri mmiri karama na ndị ọzọ ngwaahịa. Ọ nwere ...